Talooyin ku saabsan safarka carruurta | Wararka Safarka
Susana Garcia | | Talooyin, safarka
Qoysas aad iyo aad u tiro badan ayaa lagu dhiirigelinayaa inay safarro wada galaan. La safri carruurta Waxay u noqon kartaa waayo-aragnimo waxtar u leh qoyska oo dhan, waxtarna u leh dhammaantood. Waxay ka caawin doontaa iyaga inay si fiican u wada xiriiraan, wadaagaan khibradaha iyo, wixii ka sarreeya, inay ku raaxaystaan ​​la shaqeynta. Nolosha mashquulka ah ee maanta, qoysaska mararka qaar waqti yar ayey isla qaataan, marka safar carruurta lala galo waa fikrad weyn.
Xoogaa ayaan ku siin doonnaa tilmaamaha safarka carruurta, waana taas inaad raacdo safarkooda waa inaad tixgelisaa faahfaahinta qaar. Laga soo bilaabo ururka ilaa meelaha la booqdo ama habka loo maro, la safridda caruurtu inta badan ma sahlana sida loola socdo dadka waaweyn, laakiin runta ayaa ah inaysan ahayn mid dhib badan sida ay dad badani u maleeyaan.
2 Shandado qof walba
3 Hoy ku filan
4 Raadi waxqabadyo qof walba
5 Ku raaci carruurta
Hadda carruurtu uma hoggaansami karaan baasaboorka qaangaarka ah, laakiin mid kastaa waa inuu lahaadaa dukumiinti u gaar ah, the DNI ama Baasaboor, iyadoo kuxiran meesha aan u safreyno. Sababtaas awgeed, dukumiintiyadaan waa in lala baxo kahor bixitaanka si ay carruurtu u safraan. Waa muhiim in horay loo sii diyaariyo waraaqaha, dib u dhacyo ama dhibaatooyin soo bixi kara awgood.
Shandado qof walba
Markaad xirxiraneyso, waa inaad tixgelisaa baahida carruurta. Dabcan way wanaagsan tahay in la helo a golaha wasiirada dawooyinka yaryar gacanta, inkasta oo hudheelada ay ku leeyihiin, laakiin haddii ay dhacdo inaan safarro ku galno oo aan waxoogaa khaldanno. Waa inaan sidoo kale xusuusannaa qorraxda iyo dharka habboon haddii aan aadno xeebta ama buuraha. Haddii carruurtu ka baqaan mugdiga, waxaan u soo qaadan karnaa iftiin yar oo booska ka caawiya inay si fiican u seexdaan una jiheeyaan habeenkii haddii ay u soo toosaan inay musqusha galaan.
Hoy ku filan
Dhanka hoyga, waa inaan tixgalino arrimaha qaar. Guud ahaan, qoysaska kuwa ugu raaxada badan badanaa waa guryaha, Kuwaas oo siiya madax-bannaanidooda oo badiyaa leh laba ama in kabadan oo qol jiif ah. Intaas waxaa sii dheer, waa inaan ogaanno haddii ay leeyihiin sariir carruurtooda haddii aan carruur qaadno, haddii ay dhacdo inaan soo qaadanno sariir safar. Maalmahan waxaa jira hoteello badan oo loogu talagalay inay carruur yeeshaan, oo leh goobo lagu cayaaro, oo leh barkado lagu dabaasho oo ammaan ah oo loogu talagalay carruurta yaryar, oo leh naadiyo leh dhaqdhaqaaqyo ku habboon kooxdooda iyo madaddaalada carruurta. Waxaan xitaa arki karnaa haddii maqaayada ay leedahay kuraas dhaadheer, maadaama ay muhiim tahay haddii cunugu yar yahay. Hoteello badan ayaa sidoo kale leh adeeg daryeel caafimaad oo ay la socdaan shaqaale aqoon u leh si dadka waaweyn ay ugu raaxaystaan ​​daqiiqado iyo waaya-aragnimo iyaga u gaar ah.
Raadi waxqabadyo qof walba
Marka ay timaado safarka, kaliya maahan carruurta ama dadka waaweyn inay ku raaxaystaan. Ku safarada waa waayo aragnimo aad u dhameystiran oo labaduba ay qaban karaan waxqabadyo xiiso leh. Haddii maalin maalmaha ka mid ah aan booqano meel u dhow baarkinka biyaha ama jardiinada madadaalada, waxaan ka tagi karnaa maalin kale si aan u booqano magaalooyinka ku hareeraysan ama meelaha xiisaha leh. Haddii ay jiraan wax xiiso u leh kuwa yaryar, waa in safaradu sidoo kale qayb ka yihiin waxbarashadooda. Ma aha oo kaliya inay baran doonaan dhaqamada kale iyo caadooyinka, laakiin waxay sidoo kale arki doonaan meelo cusub, qaababka wax loo qabto, iyo balaadhinta adduunyadooda.
Inta lagu gudajiro safarka, waa inaan raadino nashaadyo madadaalo iyo madadaalo leh, oo leh jardiinooyin, aquariums ama zoos. Laakiin sidoo kale waa inaad ku dar xoogaa dhaqan iyo waxbarasho ah safarada gudahooda. Kuu tusi aaggii hore, burburka taariikheed oo kuu sheego halyeeyada iyo sheekooyinka ka dambeeya. Carruurtu waxay baran doonaan iyo xiisaha ay u qabaan dhaqamada kale iyo waxyaabo badan oo badan ayaa lagu kicin doonaa. Waa waddo kale oo ay iyaga ku kobciyaan caqligooda iyo xiisaha dabiiciga ah iyagoo waqti fiican qaadanaya.
Ku raaci carruurta
Markasta oo aan madax ka dhaqaaqi doonno meel ka mid ah ilaa meel kale, waa inaan sidoo kale qabannaa diyaarad qaado ama tareen ama bas. Xaqiiqdu waxay tahay marka la eego diyaaradda waa inaan ogaanno faahfaahinta marka aan la safreyno carruurta, maaddaama ku dhowaad dhammaantood ay oggol yihiin la safridda carruurta iyo carruurta ka yar laba sano jir iyaga oo aan u bixin tikidh iyaga. Shuruudaha waa in si taxaddar leh loo akhriyaa ka hor inta aan la iibsan tikidhada qoyska. Shirkado badan xitaa waxay leeyihiin kuraas gaar ah oo kuwa yaryar ah waxayna u oggolaadaan inay la fuulaan kuraasta carruurta iyo kuraasta carruurta, in kasta oo ay tahay inaad horay u sii hubiso. Guud ahaan, shirkad kastaa waxay dejisaa shuruudaheeda, markaa waa inaad si fiican u aqriso ka hor intaanad la bixin qoyska oo dhan.
Talada kale ee wanaagsan ee ku saabsan gaadiidka ayaa ah inaan qaadno kaniiniyada dhaqdhaqaaqa jirrada ama hab kale haddii ay carruurtu u baran waayaan oo ay dawakh ku noqdaan. Dhalada biyaha iyo bacaha loogu talagalay baddu waxay noqon kartaa qalab kale oo la tixgeliyo si loogu qaado boorsada safarka taas oo aan ku yeelan doonno wax kasta oo lagama maarmaan u ah inaan maalinta ku qaadno dhib la'aan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Talooyin ku saabsan safarka carruurta